iOS 5 ye iPhone | IPhone nhau
iOS 5 kwave kuri Apple's mobile operating system umo SIRI yakatanga kekutanga, mubatsiri wezwi uyo anokwanisa kuita zviito zvakawandisa nemirairo yakataurwa. iOS 5 yakaunzawo kuwanda kwakawanda senge kugona kugadzira zviyeuchidzo zvetsika, iyo Zviyeuchidzo kunyorera, kugona kutumira mameseji emahara kuburikidza neMessage, kuvandudzwa kweiyo kamera application (HDR, grid uye vhoriyamu kumusoro bhatani kutora iyo foto), kusangana neiyo social network Twitter kana kuiswa kwe ziviso nzvimbo.
Ivo vanokwanisa kuisa matatu akasiyana mavhezheni eIOS pane iyo iPad 2
kubudikidza IPad nhau inoita 7 makore .
Vashandisi veMac vane rombo rakanaka rekugadzira zvikamu zvakasiyana pamakomputa edu nemaitiro akasiyana e ...
Apple inobvumira kuburitswa kweshanduro dzekare dzekushandisa
kubudikidza IPad nhau inoita 8 makore .
Kana imwe sisitimu yekushandisa ikatangwa, nhau dzese dzinoiswa pazvinhu zvitsva zvainosanganisira, uye zvinowanzoitika ...
Isa iyo nyowani vhezheni yeCydia 1.1.8 pane iOS 5
kubudikidza Gonzalo R. inoita 9 makore .
Nekuburitswa kwetethered jailbreak yeIOS 6 Saurik yakaburitsa vhezheni itsva yeCydia, vhezheni 1.1.8….
Midziyo inogona kudzoreredza kuIOS 5.x neRedsn0w 0.9.15b1 nyowani
Iyo itsva vhezheni yeRedsn0w ichangoburitswa neDev-Chikwata inosanganisira sarudzo dzekudzosera kuIOS 5.x iyo…
Mutauro Wekubatsira +: wedzera mutauro wechiSpanish kuSiri pane yako iPhone 4S ine iOS 5 (Cydia)
Uku ndiko kugadzirisa uko vazhinji vedu takanga takamirira kuti tirambe takabatirira paIOS 5.1.1 ine untethered jailbreak, ehe ...
Safari Dhavhidha Maneja 2.0 Zvino Inowanikwa (Cydia)
Dustin Howett akatanga chirongwa chitsva cheSafari Download Dhairekita yeiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata, iyo…
Redsn0w 0.9.11b1 inobvumira kudzikira ku5.0.1 kune iPhone 4S
Redsn0w yakagadziridzwa kuita vhezheni 0.9.11b uye ikozvino inobvumidza kudzikira kune iPhone 4S, iPad 2 uye Nyowani ...
iOS 5.1.1 ikozvino yave kuwanikwa (zvinongedzo neakananga kurodha pasi)
kubudikidza Zvakanakisa zveIOS inoita 9 makore .
Apple ichangobva kuburitsa iOS 5.1.1, yekuvandudza iyo inogona kuburitswa kubva iTunes kana Pamusoro Pemhepo (OTA) kuenda ...
Solution: Ini handikwanise kugadzirisa yangu iPad kuburikidza neOTA
kubudikidza IPad nhau inoita 9 makore .
Vanhu vazhinji vari kuyedza kugadzirisa yavo iPad kuburikidza neOTA, vachishandisa iyo Software yekuvandudza inowanikwa kubva kune iyo yega iPad magadziriso, asi ...
Dzidziso: jailbreak yakasungirirwa kuIOS 5.1 neRedsn0w yeIpad 1 (Mac uye windows)
Mune ino dzidziso isu ticha tsanangura maitiro ekuita jailbreak Tethered iOS 5.1 uchishandisa Redsn0w 0.9.10b6. Inoenderana chete ...
Dzidziso: gadziridza yako iPhone kune iOS 5.1 pasina kuisa iyo baseband (Windows neMac)
Nedzidziso iyi iwe unozogona kugadzirisa yako iPhone kune iOS 5.1 pasina kuisa iyo baseband kuti ukwanise kushandisa iyo Gevey SIM ...